Windows 10 waxaa ku jiri kara muuqaal sida macOS Spotlight | Waxaan ka socdaa mac
Windows 10 waxaa ku jiri kara muuqaal sida macOS Spotlight
Haddii uu jiro mid ka mid ah shaqooyinka ugu badan ee tilmaamaya macOS marka loo eego kuwa kale, taasi waa Barta bartamaha. Astaantan, oo ku jirta nidaamka hawlgalka desktop ee Apple, way awoodi kartaa raadso codsiyo, dukumiintiyo, sawirro iyo xitaa sameyso lacag beddelid, halbeegyo lagu cabbiro ama lagu sameeyo howlo xisaabeed.
Laga soo bilaabo Microsoft waxay ogyihiin muhiimadda shaqooyinkani u leeyihiin isticmaaleha: sahlanaanta isticmaalka ayaa lagu daray in markasta xisaabta lagu daro. Iyo haddii hawl keliya aan ku daboolno baahiyo kala duwan, ka dibna ka sii wanaagsan. Haddii aan dhawaan ogaanay sida Microsoft waxay ka shaqeyneysay shaqo qaabka ugu fiican ee AirDrop, hadda waa la ogaa in Windows 10-ka cusbooneysiinta isticmaaleyaashu ay layaab cusub yeelan doonaan.
Muuqaalka waxaa hadda heli kara oo keliya xubnaha barnaamijka Windows Insider. Iyo maxaa horumarin lahaa Microsoft waa shaqo raadinta qaabka ugu caansan ee Spotlight ee macOS. Shaqada waa qarsoon tahay, sida ay uga digayaan xariirka Talyaaniga Aggiornamienti Lumia, kuwaas oo mas'uul ka ahaa soo bandhigida ujeedooyinka Redmond.
Sida muuqata, tani waxay horseedi doontaa hab cusub oo lagu raadiyo loona isticmaalo Cortana (kaaliyaha codka Microsoft). Sida aan soo sheegnay, waayo-aragnimada isticmaalaha ayaa aad muhiim u ah maanta. Oo hadda, halkii sanduuqa raadinta ka muuqan lahaa korka hawsha, daaqad buuxda ayaa furmi doonta oo lagu raadin karo (cod ahaan ama kiiboodhka) natiijooyinkuna waxay ka muuqan doonaan isla daaqadda. Taasi waa, isku mid sida ay ku dhacdo macOS iyo Spotlight.
Sidoo kale, isla daaqadda waxaa ku jiri doona tabs kala duwan oo laga dooranayo qaybta Mac-ka ah ee laga raadinayo: Dhammaan, Shabakadaha, Dukumintiyada iyo Habeynta (waxaad ku eegi kartaa waxaas oo dhan shaashadaha aan ku soo lifaaqno gelitaanka). Ugu dambeyntii, shaqadan cusub ayaa lala baryi doonaa isku darka furaha "Win + S". Fiidiyowga waxaad ku arki kartaa Muuqaalkan tooska ah ee 'Windows Spotlight' oo ka shaqeynaya waxqabadka fidsan. Sidee u egtahay? Ma u egtahay shaqada macOS?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Windows 10 waxaa ku jiri kara muuqaal sida macOS Spotlight
Waxaan falanqeyneynaa dhibcaha dhagaha 'Vantablack headphones', qalabka dhegaha ee Bluetooth oo leh saldhigiisa lacag bixinta
Apple waxay soo iibsaneysaa bilow run ah oo la kordhiyay oo la yiraahdo Vrvana